» अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदको नयाँ कार्य समिति निर्विरोध, अध्यक्षमा के.एम. तामाङ
अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदको नयाँ कार्य समिति निर्विरोध, अध्यक्षमा के.एम. तामाङ
१ पुष २०७५, आईतवार ०३:०१
भारत, ०१ पुस । अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदको नयाँ कार्य समिति निर्विरोध चयन भएको छ । ‘विश्वभरिका तामाङहरू एकजुट होऔँ, तामाङ पहिचान र सँस्कृति समृद्ध पारौँ’ भन्ने नारासहित भएको परिषदको चौथो सम्मेलनले अध्यक्षमा भारतका के.एम. तामाङ सहितको नयाँ कार्यसमितिलाई निर्विरोध चयन गरेको मिरिकबाट तामाङ पत्रकार संघ मकवानपुरका सचिव दिलबहादुर लामाले जानकारी दिएका छन् ।
समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा टासी लामा तामाङ, उपाध्यक्षमा उत्तर– दक्षिण अमेरिकाका भोजकुमार दोङ, युरोपबाट बिबि लामा तामाङ, पूर्वि एशिया तथा अष्ट्रेलियाबाट अस्मिता लामा, खाडी तथा मध्यपूर्वी क्षेत्रबाट सोनाम दोङ तामाङ, दक्षिण एशियाबाट कुमार ब्लोन तामाङ र महिलातर्फ मीना तामाङ लुङ्बा निर्विरोध चयन भएका छन् ।
त्यस्तै समितिको महासचिवका मोहन गोले तामाङ, सचिवमा रबिन कुमार लामा, सचिव महिलामा गोपीमाया मोक्तान, कोषाध्यक्षमा कमला तामाङ थिङ र सहकोषाध्यक्षमा नानु गोम्जा (सिता) चयन भएका छन् । अध्यक्षले परिषदका लागि एक जना सचिव पछि मनोनित गर्नेछन् ।
शुक्रबारदेखि भारतको मिरिकमा भएको परिषदको सम्मेलन अन्तर्गत शनिबार कार्य समिति चयन भएको हो । तामाङ समुदायका विभिन्न संघसंस्था तथा समूहले र्याली, झांँकीसहित नगरपरिक्रमा गरी सम्मेलनको सुरुवात गरेका थिए । लामा गुरूहरुबाट मोलम पाठ र तम्बा संघ नेपालको डम्फु गीतसँगै सुरु भएको समारोहमा बंगालका पर्यटनमन्त्री गौतम देवले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले तामाङले तामाङको धर्म,संस्कृति र पहिचान भुल्दै गएकोमा दुःख व्यक्त गरेका थिए । परिषदका साथै तामाङ समुदायका विभिन्न संघसंस्थाहरु समेत निश्कृय भएकोमा उनीहरुले गुनासो पोखे ।
सम्मेलनमा अमेरिका, कोरिया, थाइल्याण्ड, भुटान,साइप्रस, कुवेत, म्यानमारबाट, बहराइन लगायतका देशहरुका तामाङ प्रतिनिधिहरु सहित नेपालबाट समेत सयौँको संख्यामा तामाङ प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । सम्मेलनको उद्घाटन सत्र परिषदका अध्यक्ष महेन्द्रजंग तामाङको अध्यक्षतामा भएको हो ।